Umhlahlandlela wakho ku-Kunming Wolfdog enamandla - Izinhlobo
Ubuwazi ukuthi izinja nezimpisi zingazalelana? Kukhona empeleni izinhlobo ezimbalwa zempisi ezakha ama-canine anolaka futhi ahlakaniphile.
Isibonelo esisodwa yiKunming Wolfdog, eyaziwa nangokuthi i- Umalusi waseShayina waseJalimane . Bangama-crossbreed abukhali futhi asebenza kanzima ukuthi abathandi bezinja nezimpisi ngokufanayo bangayifuna le pooch.
Ingabe izinja zezimpisi zihlala zikuthanda? Qhubeka upheqa ukuthola okwengeziwe ngale fido emangalisayo.
Umlando: Yini iKunming Wolfdog?
Ibukeka kanjani iKunming Wolfdog?
Isimo sezulu: Ingabe amaKunming Wolfdogs afuyiwe?
Ungayinakekela kanjani i-Kunming Wolfdog yakho
Ingabe le hybrid yempisi iphilile?
Ungathenga kuphi / ukwamukela umalusi waseJalimane waseShayina
Ezinye izinja zempisi ongazithanda
Ingabe i-Kunming Dog isilwane esifanele kuwe?
Yize kunemibhalo elinganiselwe mayelana nokuthi iziphi izinhlobo ezakha iKunming Wolfdog, kukholakala ukuthi zasungulwa ngeminyaka yama-1950s ngokuzalanisa abelusi baseJalimane abavela eJalimane nezinja zasempini zasendaweni.
Zenzelwe izinhloso zamasosha nezamaphoyisa eYunnan, eChina. Bavunywa ngokusemthethweni njengenja yakwaKunming, eqanjwe ngegama lenhlokodolobha yesifundazwe, yiChinese Public Security Bureau ngo-1988. Ekugcineni, baba izinja zokuqapha eziwusizo nezimboni zokuqapha.
Uma uzibuza ukuthi ngabe le fido yaziwa yi-American Kennel Club (AKC) noma i-United Kennel Club (UKC), akunjalo ngoba kusathathwa njengokungajwayelekile. Noma kunjalo amaKunmings abonwa yi Izwe laseKennel Club (CKC) ne-Dog Registry of America, Inc. (i-DRA).
Kulolu hlobo, umehluko omncane wofuzo phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili udala umehluko omkhulu ebuntwini.
Ngakho-ke, ukukusiza uqonde kangcono i-Kunming Wolfdog, nakhu ukubuka konke okusheshayo kwabazali babo.
Hlangana noMalusi waseJalimane
Le canine enolaka yaphuma ezinjeni zokhokho baseJalimane abelusayo, kodwa kwaze kwaba ngasekupheleni kweminyaka yama-1800 lapho kwabhalwa khona indinganiso Abelusi BaseJalimane (GSD).
Emuva ngaleso sikhathi, abanikazi babengacabangi lokhu njengabalingani. Esikhundleni salokho, babezibona njengezinja ezelusayo nezolimo.
Ziyihlobo eliphakathi nendawo ukuya kwelikhulu eline- imisipha, isiqu somusa ngobude obungafinyelela kumasentimitha angama-65 futhi lungaba nesisindo samakhilogremu angama-88. Bavame ukuba kude lapho behlangana nabantu abangabazi okokuqala ngqa, kepha ekugcineni bazofudumala kulabo abasondelene nomndeni wabo wesintu.
Abelusi baseJalimane baziwa ngokuba uqotho ngokwedlulele futhi kuhle ekuvikeleni abanikazi bawo.
Hlangana nenja yempisi
Izifundazwe eziningi zinemithethonqubo kule nja nembuzi enqamulelayo. Badinga izinsiza eziningi nokubekezela. Izimpisi banamandla, banemisipha, futhi, njengabazali babo bempisi, bayashibilika lapho bethuka.
Okungaziwa ngabantu abaningi ukuthi le nhlanganisela ingumdlali weqiniso.
Eyodwa i-anecdote uyaphawula, “Uma lokho kuvivinya umzimba kungenzeki, izinja eziyizimpisi zivamise ukuzenza zona ngokwazo. Omunye uWolfdog wahlafuna ngodonga olomile endlini yomnikazi wakhe wazivumela wangena egalaji. Wabe esecekela phansi imoto yomnikazi wakhe. ”
Bangu i-wolfdog ephezulu- nokuqukethwe okuphansi Izinhlobo ze-wolfdog, okusho ukuthi ezinye zizoba khona kakhulu, kanti ezinye zizoba nezakhi zofuzo eziphansi zempisi. Ubuntu bale nja kuzoba nzima ukubulindela ngamaphesenti aphezulu wezakhi zofuzo zempisi.
Ngokuvamile, angakhula amade njengamasentimitha angu-84 futhi angaba nesisindo esingamakhilogremu angu-54.
Njengabazali bayo, i-Chinese German Shepherd inemisipha, inamakhanda amakhulu, aluhlaza nemizimba emide emise okonxande. Umsila wazo mude futhi unamahlathi agoqayo uma ethakazekile.
Banamehlo ayindilinga, amnyama abekwe phambili ebusweni babo, afana namehlo empisi. Izindlebe zazo zinkulu, zingunxantathu, futhi zikhombe, nezifinyiso zazo zimnyama.
Ama-Kunmings anezinwele ezimfishane kunabazali bawo be-GSD kepha anemibala efanayo yoboya. Amajazi abo anezimpawu ezimnyama zezihlalo, nazo zonke ezinye zazo zoboya zisukela otshanini obukhanyayo kuye ekugqonyeni okujulile. Le fido iyi hhayi i-hypoallergenic njengezinye izinja ezinqamulelayo, kepha sizoxoxa kabanzi ngalokho kamuva.
Usayizi we-Kunming Wolfdog
I-Chinese German Shepherd iyi- inja enkulu futhi mude kancane kune-GSD. Ama-Kunmings angahluka kusuka ku- Amasentimitha angama-25 kuya kwangu-27 (63.5 kuye ku-68.6 cm) ukuphakama, futhi isisindo sabo sihluka kakhulu kusuka ku- Amakhilogremu angama-66 kuye kwangama-84 (30 kuya ku-38 kg).
Ngenxa yobukhulu bazo, kunjalo ilungele kangcono amahektare avulekile womhlaba ukuzulazula - bebengeke bajabule efulethini noma egcekeni elisezingeni elilinganiselwe.
Le vidiyo emfushane izokukhombisa ukuthi iKunming Wolfdog ingathola izinkulu kangakanani nezinwele ezinde:
Yebo, kunjalo, kepha njengazo zonke izinja, ziza neziqu. Kunming izinja kukhona uhlakaniphile ngendlela emangalisayo kepha uzigcinele abantu ongabazi . Futhi zingenye yalezo zinhlobo ezikhula kahle lapho zigcinwa zisebenza. Ngemuva kwakho konke, abafuyi bazidalele ukwenza imisebenzi yokuqapha, yamaphoyisa, neyezempi. Ngalokho kusho, kunjalo ifanele kakhulu abanikazi abanolwazi abajabulela ukuba sendleleni .
Ngakho-ke ungavumeli igama lezinhlamvu ezi-4 elithi 'impisi' likuqede amandla ekubeni ngumnikazi wale nhlanganisela. Ama-Kunmings angaba namandla futhi aqwashise ngo-canine, kodwa ayangeneka futhi ahamba kalula.
Yize usayizi wabo uyikhwalithi enhle kakhulu yokuba yinja yesevisi, akuyona inketho efanelekile yomuntu ofuna insizakalo noma inja yokwelapha.
Kuma-quirks, inja enesithukuthezi yeKunming izodala inkathazo futhi ingalimaza, ngakho-ke qiniseka ukuthi ubanikeza ukuzivocavoca okuningi negumbi lokuzula. Kulabo abanezinye izilwane ezifuywayo, ikakhulukazi ezincane, le nja ine- ukushayela okuphakeme , futhi kufanele uzigcine kude noma ube nale fido njengesilwane sakho kuphela.
Abangaba ngabanikazi bezinhlobo zamaShayina aseGerman Shepherd kufanele baqaphele kakhulu uma kukhulunywa ngenhlalo yabantu. Kuyiqiniso: i-wolfdog ayinakho ukuthambekela okungokwemvelo maqondana nokuziphatha komphakathi noma ukujabulisa abantu. Ngalokho kushiwo, okuwukuphela kwendlela yokubhekana nalokhu ukuhlangana nabo ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Bona kungaba umlomo futhi ulume uma ungaqeqeshiwe njengomdlwane omusha kakhulu. Uma ungaqapheli, bangaba nolaka futhi bazame ukulawula indlu yakho. Uma sebeqeqeshiwe, bangaziphatha kahle ezungeze abancane bakho nezivakashi abafunde ukuzihlanganisa nabo.
Into emnandi ngale nja ukuthi bona thanda ukufunda amakhono amasha ! Ngakho-ke, uma usuphethe isibambo kubo bobabili ukunaka kwabo kanye nemvelo yabo yempisi, ungabaqeqesha ukuthi benze noma yini enhle kakhulu. Le yi-canine ethokozela ukuphonselwa inselelo.
Uma ufuna incazelo ejulile namathiphu okuqeqesha mayelana nezimpisi, njengeKunming, kufanele ubuke le vidiyo:
Ngisho nezinwele ezimfushane, amaKunmings anjalo camera kabili futhi izokhipha ngesikhathi sokuchitha. Kungcono ukusebenzisa ibhulashi eliqinile eline-hybrid yempisi yakho nsuku zonke .
Ezinye izincomo zokuzilungisa zalolu hlobo zijwayelekile impela. Hlola bese uhlanza amehlo, izindlebe, namazinyo e-doggo kanye ngesonto.
Ukugeza njalo emavikini amabili kuyalulekwa ngalezo zinja zeKunming ezihlala endlini kaningi. Uma i-pooch yakho isebenza futhi yenza umsebenzi wangaphandle, khona-ke ukugeza isonto lonke kungaba ngcono.
Ungakhohlwa ukusika izinzipho zakhe kanye ngenyanga!
Ukuvuselelwa ngokomzimba nangokwengqondo kuyahambisana, ngakho-ke inani eliphelele le- okungenani imizuzu engama-60 yokuzivocavoca nsuku zonke yanele le fido.
Ukondla, umuntu omdala weKunming udinga isilinganiso se- Izinkomishi ezi-3 ukuya kwezi-4 zokudla kwezinja nsuku zonke , okungaba wukudla okuluhlaza noma okuxutshwe nama-kibbles omile.
Khumbula ukuthi inani lokudla onika inja yakho, noma ngabe i-purebred noma i-wolf hybrid, kufanele isuselwe ezicini ezifana nobudala bazo, ubukhulu, izinga lamandla, kanye nempilo.
Izinja ze-Kunming ziphilile impela, zinempilo yokuphila kwe- Iminyaka engu-12 kuya kwengu-14 . Azinakho ukugula okuningi kofuzo, kodwa zisengaba nezinkinga ezithile zezempilo.
Ezinye zazo i-myelopathy ewohlokayo , ukuqunjelwa, indololwane kanye ne-hip dysplasia, kanye nesifo sikashukela se-canine.
Bangabuye bahlupheke nge Isifo seVon Willebrand kanye ne-canine lupus, kodwa kuhle kakhulu.
Uma ufuna lolu hlobo, sicela wazi ukuthi ababaningi odokotela bezilwane noma imitholampilo abazokwamukela izinja eziyizimpisi njenge iziguli . Ngaphambi kokuthola eyodwa, hlola i-vet ongathembela kuyo uma kwenzeka noma yini engathí sina inja yakho eyi-wolfy.
Uma usufinyelele lapha futhi usenentshisekelo yokuba ngumnikazi we-Kunming Wolfdog, kungenzeka ukuthi uzo ngidinga ukuya eChina ukuthenga eyodwa noma ukulethile.
Kukhona cishe 6 kuya ku-8 imidlwane udoti ngamunye, futhi noma amaShayina ezala le nja,
Uma kufanele uthole umdlwane noma umuntu omdala ongamthenga, ngincoma ukuthi ufunde Lesi sihloko nguJill Moore ngokuhlangenwe nakho kwakhe nge impisi nzalo .
Kodwa bambelela! Kunenye into okufanele ucabange ngayo. Ingabe uvunyelwe ngisho nokuba nomnikazi wempisi njengesilwane edolobheni noma esifundazweni sakho? Njenge-Pitbulls, kuzofanele ubhekane nokuthi ngabe le hybrid isemthethweni noma ayikho emthethweni ukuba nayo endaweni yakho.
Ingabe kusemthethweni ukuba nomnikazi weKunming Wolfdog e-U.S.?
Impendulo yalokhu izoncika lapho uhlala khona. Ngenkathi i-Federal Animal Welfare Act ichaza futhi ilawula inzalo njengezinja ezifuywayo, ezinye kusho namanje noma uvimbela ngokuqondile izinja zezimpisi.
Kusho lokho vimbela ubunikazi be-wolfdog ngokudinga izimvume namazinga wokufaka afaka phakathi I-Alabama, Arkansas, California, Delaware, Florida, Idaho, Kentucky, Maine, Maryland, Mississippi, Missouri, North Dakota, Pennsylvania, South Dakota, naseVirginia .
Kusho lokho ngokuphelele ukuvimbela ubunikazi abazimele bezimpisi faka phakathi I-Alaska, Connecticut, Georgia, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Michigan, Michigan, New Hampshire, New York, Rhode Island, nase Wyoming .
Izifundazwe ezisele, kusukela ngo-2013, vumela ubunikazi be-wolfdog . Abanye banemithetho ethile maqondana nephesenti elivunyelwe lezakhi zofuzo zempisi ukubheka i-hybrid isilwane esifuywayo, noma kunjalo. Buza nge-ejensi yezilwane zasendle yangakini ngaphambi kokuthatha ukuhambisana nemithetho yezwe lakho.
Abalimi be-Kunming Wolfdog & abasindisayo
Asizange sithole noma yimuphi umfuyi noma ikennel elithile leKunmings, kepha sithole amawebhusayithi ambalwa anikela ngezimpisi ngokujwayelekile. Ungahlola nabo uma benalo lolu hlaka oluthile. Ukucacisa nje, asikwazi ukufakazela lezi zingosi ngiyacela yenza olwakho ucwaningo ukwenza isiqiniseko sokuthi usebenzisana nomthengisi wemidlwane onedumela elihle.
Zilungiselele ukuphendula imibuzo futhi buza abambalwa okwakho ukuthola ukuthi umdlwane noma impisi ingumdlalo ofanele yini kuwe.
Nawa amawebhusayithi anemidlwane ye-wolfdog etholakalayo
Midnight Run Izimpisi (I-Richmond, KY)
Kukhona nokuhlengwa kwempisi okuningana okufanele kubhekwe ngoba abanikazi abavamisile ukulungela ukuphatha lolu hlobo bese beyeka inja. Vakashela lezi zingosi ezilandelayo zokutholwa ukuze ubone ukuthi ungambona yini umalusi wase-Chinese waseJalimane:
Iphrojekthi yaseTexas Wolfdog (EMontgomery, TX)
Amapulazi e-Howling Woods (UJackson, NJ)
Indawo Engcwele Yase-Ohio Wolf (I-Chesapeake, OH)
I-Kunming ingenye nje yezinhlobo ezimbalwa zama-wolfdog azungezile. Uma unentshisekelo kuma-canine anezakhi zofuzo lwempisi noma uthanda nje izinja ezinkulu noma ezinkulu noma ama-fidos abukeka njengezimpisi, lezi zinhlobo ngeke ziphoxe:
Inja YamaNdiya Omdabu waseMelika
I-Wolfdog yaseJapan (AKA Shikoku)
Uma ama-hybrids afana nalawa enamandla kakhulu kuwe, ingxube ye-German Shepherd ingahle ifanele wena, njenge ESheprador noma a UGerberian Shepsky , mhlawumbe enye inja engavamile efana ne- UCanis Panther ingabamba intshisekelo yakho, nayo.
Le wolfdog ingahle ibhekane nakho okuningi, kepha kunjalo eqotho ngokwedlulele kuwe nakwiphakethe lakho lonke uma selitholile ukuzihlanganisa nokuqeqeshwa okufanele. Bayizinja eziqaphile kakhulu, futhi!
Uma ufuna i-canine ukuze ube ngumlingani wakho wamaphoyisa futhi kusemthethweni ukuba nale fido esifundazweni sakho, khona-ke kungenzeka ukuthi uthole inja ephelele.
Ngezici ezifana nokuba nomdlandla nokusebenza kanzima, ungacabanga ukuthi zifana nanoma iyiphi enye inja. Kepha khumbula ukuthi banofuzo lwempisi, ngakho-ke baningi kunconyelwe abanikazi abanolwazi .
Ucabangani ngale hybrid yempisi? Uke waba nokuhlangenwe nakho nganoma iyiphi i-wolfdog? Yabelana ngemicabango yakho nathi ngokushiya amazwana ngezansi.
5 Izincwadi Zokuqeqesha Izinja Ezinkulu
mangaki amazinyo asemlonyeni wezinja
ukusika okujwayelekile kwe-poodle ehlobo
igolide retrieverel mix mixpy
imidlwane yokuxuba i-rottweiler ne-pitbull